Fayraska korona: Xajka sanadkan ee la koobay dadka tagaya oo lagu wado inuu ka bilowdo Sacuudi Carabiya
29th July 2020 by Barre Leave a Comment
Acmaasha Xajka ee sanadlaha ah ee caadiyan ay gutaan Muslimiinta ku nool daafaha dunida ayaa waxa ay bilaabanayaan maanta oo Arbaca ah, hasayeeshee waxaa aad loo soo koobay tirada dadka ka qeybqaadanaya fayraska korona awadii.
Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay mamnuucday dadkii caalamka ka iman lahaa ee tegi lahaa magaalada barakaysan ee Makkah al-Mukaramah, arrintaas oo ay dowladdu uga gol-leedahay sidii lagu xakamayn lahaa cudurkaasi safmarka ah.
Waxaa loo ogolaaday oo kaliya muwaadiniinta dalalka kale ka soo jeeda ee deggan boqortooyada inay Xajka sanadkan gutaan.
Illaa laba milyan oo qof ayaa caadiyan sanadkiisa Xajka guta, hasayeeshee sanadkan ayaa waxaa la filayaa inay gutaan dad aanan ka badnayn 10,000 oo qof.
Dadka loo ogolaaday inay ka qeybqaataan Xajka sanadkan ayaa waxaa laga baarayaa fayraska iyo heerkulka jirkooda markii ay soo gaaraan magaalada Makkah, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP.
Dadka goobtaas barakaysan cibaadada u tagaya ayaa waxa ay tahay inay iskarantiilaan Xajka ka hor iyo kaddibba, AFP ayaa sidaas ku warrantay.
Wareysi uu bilowgii todobaadkan siiyay taleefishinka al-Carabiyah ee uu Sucuudigu maalgaliyo, ayuu wasiirka Arrimaha Xajka Maxamed Saalax Bintin uu ku sheegay in xujayda guryahooda lagu karantiilay ka hor inta aanan muddo afar maalmood ah lagu sii karantiilin hoteello ku yaal magaalada Makkah.
Dadka xajka gudanaya 30% ka mid ah ayaa la sheegay inay yihiin muwaadiniin u dhashay waddanka Sucuudiga halka inta soo hartayna ay yihiin ajaanib deggan boqortooyada.
Boqortooyada ayaa waxa ay diiwaangelisay in ka badan 270,000 oo xaaladood oo fayraska korona ah, halka dhimashaduna ay cagacagaynayso 3,000.
Dalka ayaa waxaa bishii la soo dhaafay laga qaaday xayiraaddii guud ee saarneyd. Xayiraado adag oo lagu doonayay in lagu xakameeyo faafitaanka fayraska ayaa waxaa la dhaqangeliyay bishii Maarso, kuwaas oo ay ka mid aheyd bandow 24 saacadood ah oo lagu soo rogay inta badan degmooyinka iyo magaalooyinka.
Sanadkastaa xilliga Xajka, malaayiin qof ayaa ugu horreyn waxay isugu tagaan teendhooyin ku yaal magaalada Mina, ka dibna waxay u dhaqaaqaan dhanka buurta Carafa iyo goobo kale oo barakeysan. Halkaasi waxaa ku kulmi jiray xujey ka kala yimid daafaha caalamka, taa oo Xajka ka dhigeyso astaan muhiim u ah dadyowga Muslimiinta.
Inkastoo dowlado badan ay horey u mamnuuceen duulimadyadii oo dhan, haddana tallaabadaasi dowladda Sucuudiga ay dadka dibadda ka imaanaya uga mamnuucday Xajka sanadkan, ayaa dhaawac weyn ku ah astaantaasi ay wada daawanayeen Muslimiinya caalamka oo dhan.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu soo dhaweysay go’aankaasi Sucuudiga, waxaana wasiir ku xigeenka arrimaha diinta ee Soomaaliya, Cismaan Aadan Dhuubow, uu sheegay in bilihii dhawaaaba laga arrisnayay waxa laga yeelayo arrinta Xajka ee sanadkan.
“Ka dowlad ahaan iyo ka mas’uuliyad ahaanna waxaan leenahay dareenka caalamka oo si gaar ah iyaga ku ahaa…oo amuurtaan culeyskeeda leh oo aan garaneyno in uu aafeeyay kulli. Go’aankaasi ay qaateen, ka dowlad ahaan waxaan u aragnaa mid waafi ah oo aan soo dhaweynayno,” ayuu yiri Cismaan Aadan Dhuubow.
Wasiir ku xigeenku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay sanadkan rajeynaysay in dad gaaraya ilaa 11,000 oo qof ay ka soo xajiyaan balse sababo la xiriira cudurkan Covid-19 ay haatan arrintaasi meesha ka abxday.
Inkastoo haatan ay tahay markii ugu hooreysay oo dowladda Sucuuudigu ay albabaada ka xirato dadka dibadda ka soo xajinaya, haddana ma ahan markii ugu horreysay oo Xajka la baajiyo inta la ogyahay taariikhda Islaamka.
Sheekh Maxamed Cabdu Uma loo ka mid ah culimada ugu caansan Soomaalida ayaa BBC-da u sheegay in haatan ay tahay markii ugu horreysay inta la ogyahay oo acmaasha Xajka loo baajiyo cudur awgii, balse haatan ka hor ay dhacday in kooxo ay qabsadeen Xaramka oo ay laayeen xujeydii halkaa u tagtay gudashada waajibaadka Xajka.
“Waxaa dhacday xilliyo ay qolyo Qaraamidha la dhihi jiray oo kharibnaa ay Xaramka qabsadeen oo xujey badan ay ku laayeen. Asalkooda Shiica ayay ahaayeen nimankaasi, oo xujeydii ay laayeen oo Xajkii ay dadka ka hor istaageen waa ay soo martay laakiin xilli cudur loo joojiyay taariikhda ma soo marin,” ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umal.